अझै ३ दिन बदली, वर्षा र हिमपातको सम्भावना ! – Sagarmatha Online News Portal
अझै ३ दिन बदली, वर्षा र हिमपातको सम्भावना !
काठमाडौं । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आगामी ३ दिन बदली, वर्षा र हिमपातको सम्भावना औंल्याएको छ ।
देशको पश्चिम भेग भएर पश्चिम न्यून चापीय प्रणाली भित्रिएको र यसको प्रभावले आगामी ३ दिन बदली, वर्षा र हिमपात हुनसक्ने देखिएको मौसमविद् प्रतीभा मानन्धरले जानकारी दिइन् ।
मौसमविद् मानन्धरका अनुसार, अफगानिस्तान र पाकिस्तान हुँदै सोमबार बिहान भित्रिएको नयाँ प्रणालीको प्रभाव अहिले देशको पश्चिम भागमा परिरहेको छ । यसकै प्रभावस्वरूप हिमाली भेगमा हिमपात र पश्चिमकै पहाडी र तराईमा हल्का वर्षा भइहेको उनले जानकारी दिइन् ।
यो प्रणालीको प्रभाव अहिले देशको पूर्वी र मध्य भागमा भने सामान्य रूपमा परेको छ । त्यसैले यी क्षेत्रमा आज पानी पर्ने सम्भावना छैन । पानी नपरे पनि काठमाडौंलगायतका क्षेत्रमा आज दिनभर घाम र बादलको लुकामारी भने जारी रहने मानन्धरले जानकारी दिइन् ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार, पश्चिम न्यून चापीय मौसमी प्रणाली भोलिदेखि भने देशको पश्चिमसँगै मध्य र पूर्वी भागसम्म फैलने छ । यसको फैलावटले भोलि हल्कादेखि सामान्य वर्षा हुने खतरा रहेको मौसमविद् मानन्धर बताउँछिन् । उनका अनुसार, हिमाली क्षेत्रमा भने हिमपात हुनसक्छ ।
यसपटक हिउँदमा पानी पार्ने मौसमी प्रणाली विगतभन्दा केही बढी देखिएको छ । महाशाखाका मौसमविद् वरुण पौडेलका अनुसार, विगत वर्षको तुलनामा यो हिउँदमा मौसमी प्रणाली छिटो छिटो अदल–बदल भइरहेको छ ।